नयाँ संविधान तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः आश्विन ८, २०७२ - साप्ताहिक
धेरै कुरा चित्त नबुझे पनि संविधान आउनु आफैंमा ठूलो कुरा हो । मैले खुला हृदयले स्वागत गरेकी छु ।
ऋचा शर्मा, नायिका
संविधान पनि गणतन्त्र जस्तो ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ नहोस् । देशभरि प्राकृतिक प्रकोपमा परेका र आन्दोलनबाट बिथोलिएकाहरूको जीवन सामान्य हुन सकोस् । संविधानमा सुधार गर्दै देश विकासको कार्यले तीव्रता पाओस् ।
गणेशदेव पाण्डे, निर्देशक
नेपालको संविधान जारी भएसँगै हाम्रो प्रतिक्षाको घडी पनि समाप्त भएको छ । हामीले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरेको संविधान पाइसकेका छौं । काठमाडौंमा मात्र होइन स्वदेश तथा विदेशका नेपाली खुसी भएको देख्दा मन निकै रमाएको छ । नयाँ संविधानका लागि सबैलाई बधाई ।
मलाई त बाटोमा धुलोधुवाँ नहोस्, धारामा पानी आओस्, लोडसेडिङ नहोस् । जनताले गरिबीको रेखामुनि बस्नु नपरोस् त्यति भए पुग्छ ।
खुसी लागिरहेको छ । संविधान आउनु भनेको विकासको ढोका खुला हुनु पनि हो । यति लामो प्रतीक्षा बल्ल पूरा भएको छ । म त धेरै खुसी छु ।
आशाका किरण देखिएका छन् । नयाँ संविधानसँगै नयाँ सोचको विकास हुनुपर्छ । देश सिस्टममा चल्नुपर्छ । जनताको हक–अधिकार कुण्ठित पारिनुहुन्न । नयाँ संविधान आएपछि देशले कोल्टो फेरेर जनताले शान्तिको सास फेर्न पाउँछन् भन्ने लागेकाले मेरो मन पनि खुसी भएको छ ।
कुञ्जना घिमिरे, हास्य अभिनेत्री
अब जे जस्तो भए पनि देशको प्रगति–उन्नतिको बाटोमा कुनै रोकटोक हुँदैन कि भन्ने आशा जागेको छ ।
अनुप सक्सेना, इभेन्ट म्यानेजर
देशले अन्ततोगत्वा एउटा निकास पाएको छ । अब राजनीतिक स्थिरता वा शान्ति प्रक्रियाबाट माथि बढेर विकास र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने मार्गतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।
विजय अधिकारी, चलचित्र लेखक
संविधान जारी भएकोमा म निकै खुसी छु, तर ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भने झैं भएको छ । किनभने जबसम्म संविधानमा तोकिएका बुँदाहरूको सही ढंगबाट कार्यान्वयन हुँदैन, यसै भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
एकदमै खुसी एवं उत्साहित छु– देशको मूल कानुन (संविधान) जारी भएको कुराले । अब हाम्रो देशमा स्थायी शान्ति र विकासले गति लिन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु ।
हरि लम्साल, संगीतकार
संविधान जारी भएकोमा असाध्यै खुसी लागेको छ । विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि अत्यन्त हर्षित छन् । आशा छ, अब सबै कुरा मिलेर हामी सबैले चाहेजस्तो नयाँ नेपाल बन्ने छ ।
लंगडो किसिमको संविधान आएको छ, तर पनि ८ वर्षको मेहनतले आएका कारण खुसी नै लागेको छ । कतिपय कुरा जुन नेपालीको पहिचान भैसकेका थिए, ती हटाइएकोमा दु:ख लागेको छ । सारा नेपालीले खोजे जस्तो संविधान आएको भए अझ खुसी भइन्थ्यो होला ।
राज श्रेष्ठ, टेलिभिजन/रेडियोकर्मी
यो संविधानका लागि हामीले लामो समय प्रतिक्षा गर्‍यौं । यो अवधीमा हामीले थुप्रै नेपालीलाई गुमायौं । करिब ८ वर्षदेखि संविधान आउला भन्न प्रतिक्षा गर्दै बस्यौं । असोज ३ गते त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ । देशले संविधान पाएको दिन म जति खुसी भएँ, यसअघि देशका लागि कहिल्लै यति धेरै खुसी भएकी थिइन् । यतिबेला देशमा नयाँ सुरुवात हुन लागे झै महसुस गरिरहेको छु ।
८ वर्षको प्रसव वेदनापछि संविधान जन्मियो, त्यसमा खुसी लागेको छ । अब हुर्कन्छ कसरी ? त्यसको चिन्ता लागेको छ ।
संविधान बनेको राम्रो हो । अब जनताले सुरक्षित रूपमा बस्न पाउनुपर्छ । देश असुरक्षित भयो र अवसर भएन भनेर कसैले बिदेसिनु नपरोस् । अबको नेपाल यति राम्रो बनोस् कि बिदेसिएकाहरू पनि अवसरका लागि स्वदेश फर्किऊन् ।
उषा पौडेल, नायिका
संविधान जारी भएकोमा मेरो मन भित्रैदेखि खुसी छ । नेपालले नयाँ संविधान पाइसकेको अवस्थामा अब नयाँ आशा पलाएको छ । सबै नेपालीको मुहारमा यो संविधानले खुसियाली भर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । संविधान आएसागै अब हामीले नयाँ नेपालको कल्पनासमेत गर्न थालिसकेका छौं । अब सबैको भलो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ ।
संयम पुरी, नायक
लिकबाट बाहिर गएको रेलगाडी लिकमा आइसकेको अवस्था छ । अन्धकारबाट बल्ल उज्यालोमा आउन पाइने जस्तो भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा गर्व गर्ने बेला छ अहिले । साह्रै खुसी छु अनि विश्वस्त छु कि अब देश विकसित हुन्छ । सबैको उन्नति हुन्छ ।
नेपाली जनताको रगत र पसिनाको कदर भएको महसुस भयो । अब हरेक नेपालीले मिलेर देश बनाउने काम गर्ने समय आएको छ । यो संविधानले सबैलाई देशप्रतिको दायित्व बुझाउने काम गरोस्, शुभकामना ।
विजय लामा, विमान चालक/अभिनेता
नयाँ संविधानलाई मैले सहर्ष स्वागत गरेकी छु । हातका सबै औंला त समान हुँदैन् भनेजस्तै यो नयाँ संविधानले पनि सबै नेपालीलाई समेट्न नसक्ला, तर संविधान बन्नुलाई नै अहिलेको अवस्थामा उपलब्धि मान्नुपर्छ । अब बन्द–हड्ताल होइन देश निर्माणमा जुट्ने बेला आएको छ ।
मैले यो ऐतिहासिक अवसरलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु किनभने यो हामी सबै नेपालीको चाहना र सपना हो । यसका साथै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई पनि समेटिएकोले गर्दा मसहित सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी यतिबेला निकै खुसी छौं । यसलाई फेरि सच्याउने ठाउँ होलान्, तर पनि असोज ३ हामी नेपालीका लागि एउटा ठुलो प्रगतिशील फड्को हो । यसका लागि केपी ओली, सुशील कोइराला अनि प्रचण्डसँगै सम्पूर्ण सभासदलाई धन्यवाद दिनै पर्छ ।
हामी नेपालीले विगतमा भोगेका दु:ख तथा अप्ठेरालाई भुलेर यतिबेला सम्पूर्ण देशवासी खुसी हुन खोजिरहेको देख्दा म भित्र पनि सकारात्मक शक्ति आइरहेको छ । हामीमा अहिले जुन सकारात्मकता सिर्जना भएको छ, यो शक्तिले देशलाई पक्कै पनि सकारात्मक मार्गतर्फ अग्रसर गराउनेछ ।
मेनुका प्रधान, नायिका
३ करोड जनताको विचार शतप्रतिशत मिलाउनु भनेको लगभग असम्भव हो । घरमा के तरकारी खाने भन्ने कुरामा त कुरो नमिलेर ठाकठुकपर्छ भने यो त संविधानको कुरा पर्‍यो । संस्कारी र गुणी सन्तान जन्माउन चाहनेले पहिले बच्चा जन्मन दिनुपर्छ । गर्भ मै सबै गुण राख्छु भनेर जन्मनै रोक्नु हुँदैन । बच्चा अलि लुते जन्मिएला त्यसलाई पौष्टिक तत्व ख्वाउँदै जाउँला । समय र परिस्थितिअनुसारको बनाएर हुर्काउँला । भविष्यमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।